Keeniyaan biyya Afrikaa jalqabaa hoggansa WHO marsaa lammaffaaf Teedroos Adaanom deeggarte taate – AMBO TV
25 Sep 2021 25 Sep 2021 AMBO TV
Lammin Itoophiyaa ganna 56 Roobii darbe Jarman irraa deeggarsa argataniiru.Jarman jalqaba deeggaruun ishee taajjabdoota raajeffachiiseera.
Ibsa waa’ee suuraa,Dr Teedroos Adaanom daariktera Ol aanaa WHO
Keeniyaan biyya Afrikaa jalqabaa hoggansa WHO marsaa lammaffaaf Dr Teedroos Adaanom deeggarte taate, Firaansi 24 akka gabaasetti.
Keeniyaan Jimaata kaleessaa marsaa lammaffaaf dorgomaa kan jiran Dr Teedroos Adaanom akka Dhaabbata Fayyaa Adunyaa hoggananiif deeggarsashee ibsite.
Deeggarsi jalqabaa biyyoota Afrikaa irraa dhufa jedhamuun eegamaa ture. Haa tahu malee biyyi isaa Itoophiyaan sababa walitti bu’insa naannoo Tigiraayiin deeggarsa kennuuf erga dhiistee haalichi wal xaxaa tahee ture.
Kaadhimamtootni hoggansa ol aanaa UN akka waliigalaatti biyya dhalootaa irraa kennama. Jimaata erga guyyaan kaadhimamtoota itti kennan darbeeti Keeniyaan Dr Teedroos akka deeggartu kan himte.
‘’Keeniyaan akka itti fufaniif hoggansa fakkeenya qabu Afrikaa yeroo murteessaa Dhaabata fayyaa Adunyaa keessa jiru ni deeggarti. Kan dhuguumsuufis ni hojjenna,” jechuun Machaariyaa Kama’uu, Ministera Dhimma Alaa Keeniyaa fuula Tiwiiterii isaanii irratti maxxansan.
Afrikaa irraa nama jalqabaa dhaabbata guddaa kana hoggane kan tahan Dr Teedroos erga weerara Koovid-19 as nama jalqaba irratti maqaan isaanii dhahamuu fi miidiyaa irrattis fuulli isaanii beekamu tahaniiru.
Ministeerri Fayyaa fi Haajaa Alaa duraanii Itoophiyaa Teedroos miidiyaalee WHO fayadamuun wal dhabdee Kaaba biyyatti balaaleffachuu isaan mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa galeera.Aafa Roobii darbe marsaa itti aanuuf akka dorgomu AFP’n gaafatee Dr Teedroos deebii hin kenniin hafan.Ammatti nama dorgomaa hin qabne fakkaata.
Biyyootni Gamtaa Awurooppaa Jarman hordofuun deeggarsa isaanii galchaa jiru jedhe Firaansi 24, AFP wabeeffachuun akka gabaasetti.
Oostiriyaan, Firaansi, Poorchugaal, Ispeen poostaa isaanii saamsuun guyyicha dursanii gara WHOtti erganiiru.
Dhaabbatichi hanga Onkoloolessa 1,2021tti poostaa isaanii hin banu.
Torbanota muraasa booda kaadhimamtootni ergaman adda bahuun gara biyyoota miseensa WHO tahan 194tti ergamu.Yoo kaadhimamtootni baay’atan Amajji, 2022 keessa filannoon gaggeeffamee gara nama shaniitti xiqqeeffama.
Sana booda sagaleen irratti kennamuun namni filame Hagayya 2022 keessa hojii isaa eegala.
Previous PostGamtaan Awurooppaa bilbila mobaayilaa hundaaf chaarjariin akka walfakkaataa ta’u murteesse
Next PostSuicide bomber kills at least eight in Somali capital